Tweets2Rue: Mifandray Antserasera Amin’ireo Olona Monina Eny An-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 21:59 GMT
Miha-mitombo ny isan'ireo mponina an-dalambe (tsy manan-kialofana) ao Frantsa: tamin'ny taona 2012, nilaza ny INSEE (Foibe Nasionaly Misahana ny Antontan'isa sy ny Fikarohana Momba ny Toekarena) fa tafakatra 141.500 ny isa ofisialin’ ireo SDF “olona tsy manana fonenana raikitra”. Nahitam-piakarana 50 % nanomboka tamin'ny taona 2001 (tatitra avy amin'ny Libération) izany.
Araka ny fikarohana nataon'ny sehatra mpanao asa soa (notaterina tao amin'ny le Parisien), satria mitombo ny fahantrana eo amin'ireo olona sahirana indrindra, miharatsy ihany koa ny fari-piainan'ireo fianakaviana marobe miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Mampiseho izany ny lahatsoratra bilaogy [anglisy] ao amin'ny habaky Guardian:
A 2009 poll found that a staggering 56% of French people felt they could one day be homeless themselves, 75% felt “solidarity” with rough sleepers.
Nilaza ny fanadihadiana 2009 fa 56 %n'ny Frantsay (isa mampivarahotsana) no mihevitra fa mety hiafara eny an-dalambe izy ireo indray andro any; 75 % kosa mahatsiaro “firaisankina” amin'ireo mpatory an-dalambe.
Tamin'ny 17 oktobra, Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Fahantrana, nahazo fitaovana hitantarana ny fiainan'izy ireo andavanandro tao amin'ny Twitter ireo olona dimy tsy manana trano fonenana, hevitra avy amin'ireo tanora monina amin'ny faritry ny mahantra ao Paris, sy mandray anjara amin'ny Génération Réactive [fr], fikambanana manantena hamolavola fomba vaovao hamahana ireo olana an-tanàndehibe amin'ny alalan'ny “fahaizana iombonana” (araka ny filazan'ilay mpiara-mamorona ny tetikasa, Emmanuel Letourneux).
Manazava ny habaky ny Génération Réactive fa ity tetikasa mifototra amin'ny Twitter ity dia fitambarana fifandraisana sy media vaovao ho amin'ny tolona amin'ny fanavakavahana ara-tsosialy mihatra amin'ireo olona miaina ao anatin'ny fahantrana lalina, ka mba hanome azy ireo fahafahana hanangana tambajotra manokana ho azy ireo ho fanohanana azy.
Nahoana no Tweets 2 Rue?
Satria olom-pirenena sy olona tahaka ny rehetra ihany ireo olona tsy manan-trano onenana raikitra, izay manana zavatra betsaka hozaraina ary maniry hatrany ny hiala amin'ny fitokanany monina.
Mba hampiroboroboana ny fampiasana ara-tsosialy tokoa ny tambajotra sosialy sy handrisika ny firaisankina miala amin'ny tontolo mahazatra.
Nisy ny bilaogy natokana ho amin'ity tetikasa ity, izay ampahafantaran'ireo olona ireo ny tenany sy hitantarany ny olana sasany iainan'izy ireo ary ny fanantenan'izy ireo. Misy kaonty Twitter manokana momba ny tetikasa @tweets2rue, mandefa indray ny sioka alefan'izy ireo ary manokatra sehatra ahafahan'ireo mpanaraka miady hevitra sy mifandray.
Ary ahoana ny fomba fampiasan'izy dimy lahy ny tambajotra? Tahaka ireo mpisera Twitter rehetra, mandefa vaovao momba ny fiainany andavanandro izy ireo, matetika momba ny olana fitadiavana toerana tsara hatoriana na ny tsy fananana kiraro sahaza, indraindray manoratra sangisangy betsaka (fanamarihana: tamin'ny 12 novambra 2013 ireo lisitra voasoratra).
Patrick M. @kanter57640 (sioka 1278, manaraka olona 33, ary manana mpanaraka 1799) no tena be resaka lavitra indrindra. Mifanakalo hevitra amin'ireo mpanaraka azy momba ny fitadiavany asa sy ny heviny momba ny fiainana izy:
@zebulonlon efa zava-dehibe ny asa fa afaka miandry ny tranon'akoho
Zavatra iray ny mandray ny fitenenana. Fa ny fanovana toe-tsaina no tena ilaina
Sébastien Moustik @DjamaikaPtiseb, (sioka 56, manaraka olona 36, mpanaraka 1618) tia mamorona tetikasa madinidinika:
Ahoana no hahitana namana raha monina eny an-dalana ianao ary eny hatrany izy.
Mampiseho ny fahasoratam-piainana goavana eny an-dalambe ihany koa ireo sioka. Manahy i Nicolas @nickopompons (sioka 149, manaraka olona 43, mpanaraka 2259) kosa miahiahy:
Efa tsaratsara ihany aho fa mahalasa adala ahy ny fikasana hakana ny zanako vavy sy ireo alikako ka mila mihetsika aho.
Ryan (@Usher226 (sioka 20 – toa voafafa ny sioka 20 -manaraka olona 23, manana mpanaraka 1541), vao avy nisioka momba ny loza ateraky ny toetr'andro mangatsiaka, ary nifandray tamin'ireo mpandray anjara sasany amin'ny tetikasa:
Tena mangatsiaka izany! Zara raha manana kitapom-patoriana aho.
Tena mangatsika be aty Metz, ary sarotra ny mahita toerana mafana. Mivaingan'ny hatsiaka aho, mangovitra.
Nisioka momba an'i Manu @115toimeme, mpandray anjara hafa ihany koa i Ryan:
(Feo) Mahatsiaro ny namany Karamoko izay namoy ny ainy teo am-pelatanany noho ny hatsiaka i Manu, herintaona katroka izay
Nisy kosa ny sioka mahabe fanantenana. Tonga tao Paris avy any Cote d'Ivoire i Manu @115toimeme (sioka tweets, manaraka olona 55 ary manana mpanaraka 706):
Hangataka fahazoan-dalana hiasa ao Frantsa aho raha mety, manana bac+2 aho
Nahasarika fampahalalam-baovao maro ity tetikasa ity, ka nahatonga lohateny lehibe tao amin'ny Stream Aljazeera sy ny tontolon'ny bilaogy frantsay. Bilaogera corto74 nanasokajy ny hetsika ho “fijerin-tsikilo tsotra izao” :
Inona no hitranga amin'ireo mahery fo vaovao dimy ao amin'ny tweetlines rehefa hifarana ny tetikasa amin'ny 15 Martsa? Tsy misy mahafantatra. Angamba, ho avotra izy ireo, havotan'ny olona be fiantrana tsy honina eny andalambe intsony, angamba hiverina ho olo-tsy fantatra ve izy ireo, na angamba hanao varo-boba ny finday raitran'izy ireo (smarphone) eny amin'ny varo-maizina… Iza no mahalala, tsy olana izany amin'izao fotoana izao, tsy izany no lohahevitra, hampahafantarana anao ny fiainan'izy ireo ao anaty tarehintsoratra 140.
Na dia izany aza, maro ireo mpiserasera no nientanentana. Mpandraharaha tsy miankina eo amin'ny sehatry ny teknolojia, Anathalie Mukundwa nankasitraka ny tetikasa:
Manahoana & Tongasoa @tweets2rue ;))) Fientanam-po be dia be eo am-pamakiana ny habakao! Tetikasa tsara
Nidera [fr] ity fisantarana andraikitra ity ny habaky ny firaisankina sy ny teknolojia Youphil:
…Mahomby kokoa ity hetsika nomerika ity mba hanaovana fanentanana momba ny fanavakavahana ara-tsosialy fa ireo afisim-panentanana momba ny fahantrana indraindray, dia tsy hahafahana mahafantatra izay zavatra iainan'ireo tsy manan-kialofana… Ankoatra izay, ny sakana ara-nomerika, na izany noho ny tsy fahafahana miditra amin'ny teknolojia vaovao na tsy fahampiam-pahaizana amin'ny fampiasana izany, dia anisan'ny antony lehibe mahatonga fanavakavahana ara-tsosialy…
Vondrona efatra no manohana ny tetikasa, ny Fikambanana Abbé Pierre [fr], France Inter [fr], la Fondation Agir [fr], ary ny Génération Réactive.